admin – Page2– MM Stars
သင့် အတွေးအခေါ် အပြုအမူနဲ့ ရုပ်ရည်တွေက ဘယ်အသက်အရွယ် ဖြစ်နေပြီလဲ
သင့် အတွေးအခေါ် အပြုအမူနဲ့ ရုပ်ရည်တွေက ဘယ်အသက်အရွယ် ဖြစ်နေပြီလဲ လက်ရှိ အသက်အရွယ်နဲ့ ထပ်တူကျရဲ.လား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ Unicode သငျ့ အတှေးအချေါ […]
သင့်အတွင်းစိတ်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ တရိစ္ဆာန်က ဘာကောင်ဖြစ်မလဲ ?
သင့်အတွင်းစိတ်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ တရိစ္ဆာန်က ဘာကောင်ဖြစ်မလဲ ? ဘာကြောင့်လဲ ? သင်ဟာ စိတ်ထားနူးညံသူလား စိတ်ရိုင်းဝင်တက်သူလား ဆိုတာရဲ. အဖြေက ရှိနေပါတယ်နော် ရှာကြည့်လိုက်ပါဦး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ […]